With Donald Trump In The White House, Robert Mugabe Wants To Restore Ties With The U.S. - PAN AFRICAN VISIONS
Mugabe, 92, has been in power for 36 years, presiding over Zimbabwe’s slow descent from one of Africa’s most productive post-independence economies—know at one point as the continent’s “breadbasket“—into an economic basket casebesieged with angry protests. The US has imposed targeted sanctions against the Zimbabwean government since 2001, following a political and economic crisis that saw violent crackdowns by Mugabe and his supporters on opposition politicians and activists. Still, the superpower has continued to provide aid assistance to the impoverished southern African nation, investing nearly $100 million annually in health programs and other initiatives through USAID.
Mugabe’s government is looking forward to Trump’s inauguration next January as an opportunity to restore relations between Harare and Washington, Chris Mushowe, the country’s information, media and broadcasting services minister, toldThe Herald, a state-run, pro-Mugabe newspaper, last week.
It celebrated Trump’s “crushing” victory over Clinton last week, touting the potential benefits to the Zimbabwean government of the change in status quo, and mockingZimbabwean opposition parties and civic movements who expressed disappointment over her loss. Several articles hailed Trump’s “establishment-shaking populist victory” as a nod to nationalism, and a lengthy editorial argued that the media attacks and criticism Trump endured would help him “understand Western characterization of Zimbabwe.”